XOG: Madaxweynihii Ahlu-Sunna ee lagu doortay magaalada Dhuusomareeb oo xabsi la dhigay !!! - Caasimada Online
Home Warar XOG: Madaxweynihii Ahlu-Sunna ee lagu doortay magaalada Dhuusomareeb oo xabsi la dhigay...
XOG: Madaxweynihii Ahlu-Sunna ee lagu doortay magaalada Dhuusomareeb oo xabsi la dhigay !!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Ciidamada amaanka Dowlada Ethiopia ay xabsi guri dhigeen Madaxweynaha ay dhawaan doorteen Ahlusunna.
Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxaa lagu hayaa Magaalada Addis ababa, waxaana la soo warinayaa in la duldhigay amar ah inuusan ku laaban karin dalka Somalia ilaa iyo amar danbe.
Wadaadkaani dhawaan lagu doortay Magaalada Dhuusomareeb ayaa waxaa lagala baxay hooy uu ka degnaa Degaanka Balidhiig waxaana loo dhaadhiciyay Magaalada Addis ababa halkaasi oo laga dejiyay hooy uu ku ahaan doono Xabsi guri.
Ujeedka xariga Sheikh Maxamed Shaakir Cali, ayaa ah mid taageero loogu muujinaayo Maamulka Galmudug oo dhawaan ay yagleeshay DF Somalia, waxaana jiro warar hoose oo sheegaya in dalabka lagu xiray Mas’uulkaasi uu ahaa mid ay ka danbeysay DF Somalia oo maaro u la Maamulka cusub oo ay Ahlusunna uga dhawaaqay Dhuusomareeb.
Maamulka Ahlusunna ayaa cadeystay inay lid ku yihiin go’aan waliba ee kasoo baxa DF Somalia, waxa ayna Madaxweynaha qunyar socodka ah uu xabsi ku muteystay ka hor imaanshiyaha DF Somalia.
Dhanka kale, Ahlusunna ayaa wado dadaalo ay kusoo deyneyso Mas’uulka laga xiray, inkastoo hadal heynta ugu badan ay tahay in deysmada Sheikh Maxamed Shaakir Cali ay tahay mid aan suuragal aheyn.